KStars 3.3.1 iri pano, inosanganisira zvitsva zvekuyedza | Linux Vakapindwa muropa
KDE Nharaunda yakave nemufaro we zivisa (kuburikidza ne KDE Neon) kuburitswa kwe KStars 3.3.1. Iyo vhezheni nyowani ndiyo yekutanga kugadzirisa kugadzirisa kweiyo 3.3 nhepfenyuro uye yasvika, pamusoro pekugadzirisa mabugs, kuwedzera mabasa matsva uye ekuyedza ekuwedzera. Kunyangwe hazvo maficha matsva achiwanzo kutora maziso, chengeta iyo "yekuyedza" teki mundangariro. Chaizvoizvo, isu tichave takatarisana nemabasa anozotipa matambudziko, asi izvo zvinoshandira kuona izvo zvinouya kune inozivikanwa KDE planetarium.
Pane zvinhu zviviri zvitsva zvinongowanikwa zveMacOS: matambudziko akataurwa pa astrometry.net abviswa. Kune rimwe divi, iyo DBus inoshanda zvakare mukuburitsa uku, izvo zvinoita kuti Ekos scheduler ishande zvakare. Dzimwe nhau dzichasvika kune ese mapuratifomu ayo aripo mapuratifomu, ndiko kuti, Linux, macOS uye Windows.
KStars 3.3.1 ikozvino inowanika kuLinux, macOS uye Windows
Mutsva wekutarisisa module.
Meridian flip yabviswa.
Dzorerazve furemu yekutarisa kana gomo rinotenderera.
Haisisiri kubvisa nhungamiro yePHD2 ichimiswa.
Chinja kune homebrew, python3, uye astroy yekugadzirisa bhodhi pane OS X.
Zvino tarisa kana chivharo cheguruva chaonekwa usati watarisa kana kamera isina shutter kana yakavharwa.
Yakagadziriswa dudziro nyaya ine Zuva, Mwedzi uye Pasi mazita.
Kstars inowanikwa mune yepamutemo Ubuntu zvinyorwa, asi kana isu tikamisa iyi vhezheni, isu tichaisa v3.2.3 yayo. Kana isu tichida kuisa KStars 3.1.1, sarudzo yakanakisa ndeyekuisa yako Snap package, chimwe chinhu chatinogona kuita kubva kusoftware centre yekuparadzira kwedu (kana ichisanganisira rutsigiro nekumisikidza) kana nekuvhura terminal uye typing inotevera kuraira
Tinogona zvakare kuiisa kubva kune yayo yekuchengetera nekutaipa iyi mirairo:
Kune kumwe kugoverwa kweLinux, unogona kurodha yavo tarball kubva pano. Wakambozviedza here? Iwe unofungei nezve KStars?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » KStars 3.3.1 iri pano, inosanganisira zvimiro zvitsva zvekuyedza